अमेजन फायर टिभी स्टिक धेरै रोचक मूल्यको लागि स्पेनमा आइपुग्छ ग्याजेट समाचार
अमेजन फायर टिभी स्टिक धेरै रोचक मूल्यको लागि स्पेनमा आइपुग्छ
रुबेन गेलार्डो | | अमेजन, खेलाडीहरू
अमेजनले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि बैठक कोठामा उनीहरूको उत्पादनहरू आनन्द लिन सजिलो बनाउँदछ। र यसले अधिक देशहरूमा शुरू गरेर - तिनीहरू मध्ये स्पेन - बाट Amazon फायर टिभी स्टिक, एक HDMI dongle जुन टिभीसँग जडित तपाईं फिल्महरू, श्रृंखला वा खेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
अमेजन फायर टिभी स्टिक एक मल्टिमेडिया प्लेयर छ रिमोटको साथ छ। यो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दछ, त्यसैले हामीलाई कम्प्युटर, मोबाइल वाaको आवश्यकता पर्दैन ट्याब्लेट स्क्रिनमा सामग्री प्ले गर्न सक्षम हुन। साथै, यो HDMI dongle आज उपलब्ध छ। Y अमेजन प्राइम प्रयोगकर्ताहरूको धेरै विशेष मूल्य हुनेछ.
हामीले भनेको छ, एक पटक तपाईं फायर टिभी स्टिकलाई आफ्नो टेलिभिजनमा जडान गर्नुभयो भने, तपाईं सक्नुहुन्छ स्पेनमा अमेजनले प्रस्ताव गर्ने सेवाहरूको आनन्द लिनुहोस्। कुन हुन्? ठीक छ, प्राइम भिडियो र यसको सबै सामग्रीहरू हेर्न सक्षम हुन, जस्तै हालसालै स्पेनमा आइपुगेको अमेजन संगीत अनलिमिटेड मार्फत संगीत सुन्नुहोस्।
त्यस्तै गरी, Spotify, Netflix वा YouTube जस्ता सेवाहरू यस HDMI डोंगलसँग उपयुक्त छन्। तर यो सबै होइन: आफै अमेजनका अनुसार स्पेनमा आएको नयाँ आविष्कार अनुप्रयोगहरूको विस्तृत सूचीको साथ देखा पर्दछ जुन डाउनलोड गर्न सकिन्छ। ,4.000,००० भन्दा बढी शीर्षक, जस बीच तपाईं पूरै परिवारको साथ भिडियो खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ; तपाइँलाई सबै चाहिन्छ रिमोटको हो जुन बिक्री प्याकेजमा समावेश छ।
अन्तमा, सम्झनुहोस् कि तपाईंसँग अमेजनको सर्भर, अमेजन ड्राइभमा भण्डारण छ। तपाईले त्यहाँ भण्डार गर्नुभएका सबै चीजहरू अमेजन फायर टिभी स्टिक मार्फत बैठक कोठाको टिभीमा हेर्न सकिन्छ। हामीले उल्लेख गरेको मूल्यको रूपमा, यो। ..59,99 युरो हुनेछ, यदि तपाईं हुनुहुन्छ भने अमेजन प्राइम प्रयोगकर्ताको मूल्य।। .39,99eयुरोमा घटाइनेछ। मेरो मतलब २० युरो कम "हामी मान लिन्छौं कि वार्षिक शुल्कका लागि तपाईंले सेवाहरूका लागि पहिले नै भुक्तान गर्नुभयो।"
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » छवि र ध्वनी » खेलाडीहरू » अमेजन फायर टिभी स्टिक धेरै रोचक मूल्यको लागि स्पेनमा आइपुग्छ
नोभेम्बर ११ को लागि गियरबेस्ट प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्